WhatsApp व्हाट्सएप २०२१ नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्, अन्तिम संस्करण - एन्ड्रोइड्स | Androidsis
एन्ड्रोइड, तपाईहरु मध्ये धेरै जसलाई थाहा छ, विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिएको अपरेटिंग प्रणाली हो, एक शेयरको साथ जुन हालको सक्रिय स्मार्टफोनको %०% पुग्छ, गुगलको अपरेटिंग प्रणाली (वर्णमाला) एक नेता हो। यहाँ को आवश्यकता र प्राथमिकता छ एन्ड्रोइडका लागि व्हाट्सएप डाउनलोड गर्नुहोस् (o डाउनलोड मजाक, जसरी तपाईंको भजुर-ले भन्छन्), सब भन्दा लोकप्रिय इन्स्ट्यान्ट मेसेजिंग अनुप्रयोग बजारमा सबैभन्दा लोकप्रिय मोबाइल अपरेटिंग सिस्टमबाट अनुपस्थित हुन सक्दैन।
त्यसोभए, हामी तपाईंलाई फेरी जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा सिकाउन चाहन्छौं एन्ड्रोइड को लागी व्हाट्सएप र कसरी यसको अधिक लाभ लिन सकिन्छ।
1 एन्ड्रोइडका लागि व्हाट्सएपले कसरी काम गर्दछ
2 Android को लागि नि: शुल्क व्हाट्सएप डाउनलोड गर्नुहोस्
3 व्हाट्सएप एपीके डाउनलोड गर्नुहोस्
4 WhatsApp को अन्य संस्करणहरू जुन तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ
4.1 व्हाट्सएप प्लस डाउनलोड गर्नुहोस्
4.2 व्हाट्सएप जीबी डाउनलोड गर्नुहोस्
4.3 व्हाट्सएप एरो डाउनलोड गर्नुहोस्
4.4 पारदर्शी व्हाट्सएप डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Android को लागी WhatsApp अपडेट कसरी गर्ने
6 एन्ड्रोइड ट्याब्लेटमा व्हाट्सएप स्थापना गर्नुहोस्
7 नि: शुल्क व्हाट्सएप बीटा कसरी स्थापना गर्ने
8 आवश्यकताहरू WhatsApp स्थापना गर्न सक्षम हुन
9 कुन मोबाईलले व्हाट्सएप स्थापना गर्न सक्नेछैन?
एन्ड्रोइडका लागि व्हाट्सएपले कसरी काम गर्दछ
व्हाट्सएप अन्य कुनै जस्तो इंस्टन्ट मेसेजिंग ग्राहक हो। व्हाट्सएपको फाइदा वा के दिनमा यसको नयाँपन थियो, यो तथ्य हो कि यसले हाम्रो फोन बुकको फाइदा लिन्छ भने हाम्रा सबै सम्पर्कहरूसँग सजिलोसँग कुराकानी गर्न सक्षम हुनेछ। जब हामी हाम्रा कुनै पनि सम्पर्कहरूसँग कुराकानी थाल्छौं, एप्लिकेसनले हाम्रो वाइफाइ वा मोबाइल डाटा जडानको फाइदा लिन्छ यसको सन्देश सर्भरमा पठाउन, पछि यसले सन्देशलाई "पुश" सूचनाको साथ प्राप्तकर्तालाई पठाउँनेछ, सम्पर्क हामीले चयन गरेका छौं। राम्रो कुरा यो हो कि यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा निजी र तात्कालिक हो।
Android को लागि नि: शुल्क व्हाट्सएप डाउनलोड गर्नुहोस्
हामी तपाईंलाई यो सम्झना दिलाउन अवसर खोल्न सक्दैनौं कि व्हाट्सएप वर्तमानमा एक पूर्ण नि: शुल्क अनुप्रयोग हो र सदाको लागि। एप्लिकेसनमा विज्ञापन वा कुनै मूल्य हुँदैन, हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछौं जब हामी चाहन्छौं र हामी कसरी चाहन्छौं। हामीले केवल यसलाई समात्नु पर्छ।एन्ड्रोइडका लागि व्हाट्सएप एपीके कुनै पनि आधिकारिक प्रदायकमा, जस्तै गुगल प्ले स्टोर, वा सिधा स्पेनिशमा एन्ड्रोइडको लागि व्हाट्सएप डाउनलोड गर्न निश्चित गर्नुहोस् बाट whatsapp वेबसाइट। अघिल्लो लिंकमा पहुँच गर्दै हामी एन्ड्रोइडका लागि सिधा व्हाट्सएप डाउनलोड गर्न सक्दछौं, यदि हामी कुनै कारणले गुगल प्ले स्टोरबाट एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न मन गरेनौं भने।
ती प्रयोगकर्ताहरू तिनीहरू प्ले स्टोरबाट व्हाट्सएप डाउनलोड गर्न चाहँदैनन्किनभने तिनीहरू आफ्नो एन्ड्रोइड फोनहरूमा गुगलको उपस्थिति कम गर्न चाहन्छन्, तिनीहरू वैकल्पिक स्टोरहरूमा रिसोर्ट गर्न सक्दछन्, जहाँ तिनीहरू फोनमा अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न सक्दछन्, सन्देश अनुप्रयोग सहित। यी स्टोरहरूमा डाउनलोड ढाँचा एक APK हो।
तपाईं स्टोरहरू पछाडि बदल्न सक्नुहुन्छ एपीके मिरर जस्तायस क्षेत्रमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक, जहाँ अनुप्रयोगका विभिन्न संस्करणहरू सुरूवात भैरहेको छ तर सबै भन्दा राम्रो कुरा भनेको यो हो कि तपाईंले आधिकारिक व्हाट्सएप वेबसाइटबाट यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो लिंकमा हेर्नुहोस्। एपीके को एक फाइदा भनेको बीटा र अघिल्लो संस्करणहरु जारी भइरहेको छ कि अन्यथा, जब सम्म तपाईं बीटा परीक्षक हुनुहुनेछ, तपाईं फोनमा परीक्षण गर्न सक्षम हुनुहुने छैन।
त्यहाँ बढि स्टोरहरू छन् जहाँ तपाईं व्हाट्सएप एपीके डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, तर APK मिरर एक उत्तम ज्ञात हो, साथै सबैभन्दा भरपर्दो भण्डारहरू मध्ये एक हुनुपर्दछ। अनुप्रयोग अपडेट गर्दा तपाईले नयाँ एपीके डाउनलोड गर्नुपर्नेछ जुन म्यानुअल रूपमा सुरु गरिएको हो र यसैले यसको समाचारबाट आनन्द लिनुपर्दछ।
WhatsApp को अन्य संस्करणहरू जुन तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ
व्हाट्सएपको पछाडि प्रयोगकर्ताहरूको एक महत्त्वपूर्ण फौज छ, जसमध्ये धेरैलाई विकास र प्रोग्रामिंगको उन्नत ज्ञान छ। यो त्यहि हो जसले व्हाट्सएप अनुप्रयोगमा परिवर्तनको प्रवाह देखा पर्‍यो, यो ठीक हो WhatsApp प्लस, व्हाट्सएपको परिमार्जन जसले हामीलाई अनुमति दिन्छ, उदाहरणका लागि, हाम्रो जडान स्थिति स्थायी रूपमा लुकाउन, डिजाइन अनुकूलित गर्नुहोस् वा यसमा अभाव भएको कार्यहरू थप गर्नुहोस्।
व्हाट्सएप प्लस डाउनलोड गर्नुहोस् यो प्रणालीको विकास भएको कुनै पनि वेब पृष्ठहरूबाट यो धेरै सजिलो छ, हामी यसको सबै सुविधाहरू र समाचारहरूको फाइदा लिन सक्दछौं।
एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो फोनमा यो संस्करण डाउनलोड गर्न सक्दछन्, सामान्य रूपमा एक एपीके को उपयोग गरेर। अद्यावधिक गर्दा, तपाईं म्यानुअल रूपमा नयाँ संस्करण स्थापना गर्नुपर्नेछ, किनभने यो संस्करण गुगल प्ले मार्फत अपडेट गरिएको छैन, जस्तो कि यो अनुप्रयोगको सामान्य संस्करणमा हुन्छ।
व्हाट्सएप जीबी डाउनलोड गर्नुहोस्
जीबीवाट्स अनुप्रयोगको रूपमा पनि चिनिन्छ, यो सन्देश अनुप्रयोगको अर्को मोड हो। यो परिमार्जन गरिएको संस्करण हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई फोनमा केही प्रकार्यहरू र अनुप्रयोगको उपस्थिति परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ। यद्यपि यो संस्करण विशेष गरी परिचित छ प्रदर्शन सुधार गर्न मद्दत गर्नुहोस् स्पष्ट तरिकामा अनुप्रयोगको यसको राम्रो प्रयोगको लागि।
यो एक संस्करण हो जसले अझ बढी गोपनीयता विकल्पहरू पनि दिन्छ, जुन अर्को पक्ष हो जुन प्रयोगकर्ताहरूले मूल्य दिन्छ र कहिलेकाँही अनुप्रयोगको सामान्य संस्करणमा मिस गर्दछ। यसले प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध केही अनुकूलन विकल्पहरूको साथ, इन्टरफेसको परिमार्जनलाई पनि अनुमति दिनेछ।
यो अनुप्रयोगको संस्करण डाउनलोड गर्न सकिन्छ यो लिंकजहाँ हामीसँग नयाँ संस्करणहरू पहुँच छन् जुन सुरू हुदै छ, जहाँ नयाँ प्रकार्यहरू र बिभिन्न सुधारहरू यसलाई समाहित गरियो। फेरी, यो एपीके ढाँचामा रिलिज गरिएको छ र हामीले नयाँ संस्करणहरू आफैं डाउनलोड गर्नुपर्नेछ, किनकि यो गुगल प्ले मार्फत अपडेट गरिएको छैन।
यो अर्को वाट्स मोड हो, जुन हामी हाम्रो एन्ड्रोइड फोनमा डाउनलोड गर्न सक्दछौं। यो संस्करण विशेष गरी यसले ल्याउने सौंदर्य परिवर्तनको लागि बाहिर खडा हुन्छ, किनकि यसले मेसेजिंग अनुप्रयोगको डिजाइनलाई विशेष रूपमा परिवर्तन गर्दछ, यसले पूर्ण भिन्न अनुप्रयोग जस्तो देखिने बनाउँदछ। यो मुख्य नवीनता वा लाभ यो परिमार्जन गरिएको संस्करणले हामीलाई दिन्छ।
अनुप्रयोगको अन्य परिमार्जित संस्करणहरूमा जस्तै, प्रयोगकर्ताहरूसँग कार्यहरूको श्रृंखला छ जुन उनीहरूले अनुप्रयोगलाई अनुकूलित गर्न सक्दछन्। तपाईं ईन्टरफेस परिमार्जन गर्न सक्नुहुनेछ, यो हुनुको साथै गोपनीयता विकल्प धेरै, प्रत्येक प्रयोगकर्तालाई यो प्रयोग गर्दा राम्रोसँग फिट हुन अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन।
अनुप्रयोगको यस परिमार्जित संस्करणको एपीके यो लिंकमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ। अद्यावधिक गर्दा तपाइँसँग हुनु पर्छ म्यानुअल्ली प्रत्येक नयाँ APK डाउनलोड गर्नुहोस् यो WhatsApp एरोबाट सुरू गरिएको छ यसमा समावेश गरिएको समाचारको मजा लिन सक्षम हुन।
एप्लिकेसन मोडको अन्तिम विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ स्थिर, सफा, सुरक्षित र प्रयोग गर्न सजिलो। यसमा केहि गोपनीयता विकल्पहरू छन्, जसले समूहमा वा व्यक्तिगत च्याटहरूमा एप्लिकेसनमा रहेको व्यक्तिगत स्तरहरूमा गोपनीयता स्तर सेट गर्न अनुमति दिन्छ। यो अनुप्रयोगको एक धेरै नै निजीकृत र सुरक्षित प्रयोगको लागि अनुमति दिन्छ।
तिनीहरूले पनि केहि प्रकार्य प्रदान गर्दछ कुनै पनि नम्बरमा सन्देश पठाउन सक्षम हुनुहोस्यदि तपाईंसँग यो तपाईंको एजेन्डामा छैन भने, तपाईंको स्थितिमा बढि अक्षरहरू लेख्नुहोस् वा तपाईंको सम्पर्कहरूको प्रोफाइल फोटोहरूमा जुम गर्नुहोस्। ती कार्यहरू हुन् जुन हामी अनुप्रयोगको सामान्य संस्करणमा फेला पार्न सक्दैनौं, त्यसैले तिनीहरू यसलाई अधिक प्रयोग गर्दछन्, यसलाई अधिक चाखलाग्दो बनाउँदछन्।
पारदर्शी व्हाट्सएप एपीके यस लिंकमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ। अनुप्रयोगको बाँकी परिमार्जित संस्करणहरू जस्तै, तपाईंले नयाँ एपीके म्यानुअल रूपमा डाउनलोड गर्नुपर्नेछ प्रत्येक पटक त्यहाँ एक नयाँ अपडेट उपलब्ध छ। यो अनुप्रयोगको सामान्य संस्करण जस्तै गुगल प्ले द्वारा अपडेट गरिएको छैन।
Android को लागी WhatsApp अपडेट कसरी गर्ने
यदि हामी जान्न चाहन्छौं कसरी WhatsApp अपडेट गर्ने, हामीसँग पकड प्राप्त गर्नका लागि दुई राम्रा स्पष्ट विकल्पहरू छन् एन्ड्रोइडका लागि व्हाट्सएपको नयाँ संस्करण.
हामी हाम्रो आधिकारिक अनुप्रयोग प्रदायकमा जान सक्दछौं, यस अवस्थामा यो गुगल प्ले स्टोर हो, र एकचोटि हामी यसलाई प्रविष्ट गरेपछि यसले हामीलाई चेतावनी दिनेछ कि कुन एप्लिकेसनहरू छन् जसको अपडेटहरू उपलब्ध छन्, यदि हामीले व्हाट्सएप भेट्टायौं भने हामीले मात्र क्लिक गर्नुपर्नेछ। "अपडेट" गर्नुहोस् जुन अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् पछिल्लो संस्करण उपलब्ध र स्वत: स्थापना।
अर्कोतर्फ, हामी सिधै जान सक्दछौं whatsapp वेबसाइट, डाउनलोड गर्दै WhatsApp .apk हामी यसलाई हाम्रो "डाउनलोडहरू" फोल्डरबाट स्थापना गर्न सक्दछौं र यसले डाटा वा वार्तालापहरू हराउँदा बिना नै स्वचालित रूपमा एप्लिकेसन अपडेट गर्दछ।
एन्ड्रोइड ट्याब्लेटमा व्हाट्सएप स्थापना गर्नुहोस्
तर हामी केवल हाम्रो एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा व्हाट्सएप मात्र राख्न चाहँदैनौं, हामी जहाँ भए पनि हामी यो जान्न चाहन्छौं र हामी जुनसुकै उपकरणमा छौं। त्यसैले त्यहाँ प्रयोगको सम्भावना पनि छ एन्ड्रोइड ट्याब्लेटमा व्हाट्सएप। एन्ड्रोइडले हामीलाई यस प्रकारको घटनाको लागि दिन्छ संभावनाहरू धेरै छन्, र स्थापना मोडलहरू पनि। सिम जडानको साथ हामीसँग एन्ड्रोइड ट्याब्लेट छ वा यो वाइफाइ मात्र हो भने, हामी व्वाट्सएप धेरै सजीलो स्थापना गर्न सक्षम हुनेछौं।
पहिलो विकल्प भनेको सिधा जानुहोस् WhatsApp वेब एन्ड्रोइड ट्याब्लेटबाट, तर हामी अगाडि जान चाहन्छौं, हामी हाम्रो अनुप्रयोग स्थापना गर्न चाहान्छौं एन्ड्रोइड ट्याब्लेटमा व्हाट्सएप। दुर्भाग्यवस, हामी के गर्न सक्दैनौ एक फोनमा एकै साथ दुई उपकरणहरु संग जोडिएको छ, तर हामी अर्को फोन नम्बरको फाइदा लिन सक्छौं, कि त भर्चुअल वा वास्तविक, हाम्रो Android ट्याब्लेटमा नि: शुल्क व्हाट्सएप पाउन।
नि: शुल्क व्हाट्सएप बीटा कसरी स्थापना गर्ने
लोकप्रिय सन्देशन अनुप्रयोगमा बीटा संस्करण उपलब्ध छ। यसको लागि धन्यबाद, हामी सक्षम हुनेछौं सबै समाचारहरू कोशिस गर्नुहोस् अरू कसैको अगाडि व्हाट्सएपमा आउँछन्। साथै, यो त्यस्तो चीज हो जुन हामी सित्तैमा प्राप्त गर्न सक्दछौं। यो तपाईको एन्ड्रोइड फोनमा स्थापना गर्न गाह्रो छैन, तपाईंले केही चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्नेछ।
त्यसो गर्नका लागि तपाईले पहुँच गर्नुपर्नेछ व्हाट्सएप बीटा पृष्ठ, जुन तपाईं पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ यो लिंक। यहाँ, तपाईले आफ्नो गुगल खातामा लग इन गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि तपाईले "परिक्षक बन्नुहोस्" बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। यस तरीकाबाट तपाईं यस बेटाको अंश हुनुहुन्छ।
अर्को कुरा डाउनलोड गर्नु हो व्हाट्सएप को पछिल्लो संस्करण तपाईंको एन्ड्रोइड फोनमा। जब तपाईं प्ले स्टोरमा अनुप्रयोगको प्रोफाइल प्रविष्ट गर्नुहुन्छ, तपाईंले देख्नुहुनेछ कि व्हाट्सएप मेसेन्जर (बीटा) देखा पर्नेछ र यसको तल यसले तपाईंलाई भन्दछ कि तपाईं पहिले नै परीक्षक हुनुहुन्छ। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको अनुप्रयोग अपडेट गर्नु हो। यसैले, अर्को पटक तपाईले प्रविष्ट गर्दा पहिले नै बीटा परीक्षकको रूपमा गर्नुहुनेछ। यस तरीकाले, तपाईले सबै समाचारहरू परीक्षण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ जुन अरु कसैको अघि आउँछ।
आवश्यकताहरू WhatsApp स्थापना गर्न सक्षम हुन
हामी एन्ड्रोइडमा फेला पार्ने व्हाट्सएप सबैभन्दा लोकप्रिय अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो। यद्यपि, फोन अपरेटिंग प्रणाली भएका सबै प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई प्रयोग गर्न सक्दैनन्। जस्तो त्यहाँ धेरै आवश्यकताहरू छन् यसलाई स्थापना गर्न। केहि आवश्यकताहरू जुन अपरेटिंग प्रणालीको संस्करणसँग गर्नुपर्दछ।
अन्य अनुप्रयोगहरूसँग जस्तै, एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करणहरू आइपुगेपछि पुरानो संस्करणहरूको लागि समर्थन समर्थित छैन। यो व्हाट्सएपको साथ पनि हुन्छ। तपाईको केसमा, अनुप्रयोग प्रयोग गर्नका लागि तपाईसँग हुनुपर्दछ संस्करण बराबर वा अधिक Android 4.0.० भन्दा ठूलो। प्रयोगकर्ताहरूको विशाल बहुमतसँग उच्च संस्करण छ। तर, यदि तपाईंसँग यो छैन भने तपाईं अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
कुन मोबाईलले व्हाट्सएप स्थापना गर्न सक्नेछैन?
अघिल्लो बिन्दुसँग नजिकबाट सम्बन्धित एउटा पक्ष सूची हो फोनहरू जुन व्हाट्सएप स्थापना गर्न सक्षम हुँदैन। कम्पनीले सामान्यतया यो सूची नियमित आधारमा अपडेट गर्दछ, प्रयोगकर्ताहरूका लागि अप्रिय आश्चर्यबाट बच्न। त्यहाँ असंख्य फोनहरू छन् जुन मेसेजिंग अनुप्रयोग स्थापना गर्न सक्षम हुँदैनन्।
नोकिया S40 यो यी फोनहरू मध्ये एक हो, जुन तपाईं डिसेम्बर ,१, २०१ 31 सम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारण, जनवरी १ को रूपमा, तपाईं अब उपयोग गर्न वा अनुप्रयोग स्थापना गर्न सक्षम हुनुहुने छैन।
अर्कोतर्फ, एन्ड्रोइडको पुरानो संस्करण भएका बाँकी फोनहरू समावेश छन्। ती सबै एन्ड्रोइड २.2.3.7.। र अघिल्लो संस्करणका साथ मोडलहरू तिनीहरूले अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सक्दछ, फेब्रुअरी १, २०२० सम्म। त्यो मिति सकिसकेपछि, सबै कुरा समर्थन समाप्त हुनेछ भनेर संकेत गर्दछ, यद्यपि यो आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरिएको छैन। त्यसोभए तिनीहरू अब यो फोनमा प्रयोग गर्न सक्षम हुने छैनन्।
एन्ड्रोइडको बाहिर, हामीसँग पनि यस केसले फोनहरू प्रभावित गरेको छ, जसले व्हाट्सएप प्रयोग गर्न सक्नेछैन। विन्डोज फोन .8.0.० को साथ मोडलहरू र पुरानो संस्करणको सन्देश अनुप्रयोगमा अब पहुँच छैन। न त ब्ल्याकबेरी ओएस र ब्ल्याकबेरी १० सँग अब यो प्रयोग गर्न सक्दछ। यो सूची महिनाहरूमा विस्तार हुँदैछ, त्यसैले यो निश्चित छ कि यसमा नयाँ नाम थपिनेछ। यदि तपाईं यस सूचीमा अप टु डेट हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं अनुप्रयोगको वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो लिंक.